Shir looga hadlayo arrimaha xaquuqda haweenka oo dalka Jabuuti ka furmay | sowora
← Busia rape victim’s kin threatened
Somalia bans Christmas celebrations →
Shir Looga Hadlayo arrimaha Xuquuqda Haweenka ayaa ka furmay dalka Jabuuti kaasi oo soo qaban qaabiyeen Wasaaradda Arrimaha Bulshada & Xafiiska Jinsiga Ee AMISOM
Shirkan ayaa socon doono muddo 4-cisho ah ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha xaquuqda haweenka iyo sidii loo ilaalin lahaa.
Hadaba nuqul ka mid ah ajanadaha shirka oo na soo gaaray ayaa waxa uu u qoranyahay sidatan:-
Rabshadda Jinsiga ku dhisan waa ku-tamasho xuquuqaha guud ee aadanaha ee lagu ilaaliyey mucaahaddooyinka caalamiga ah ee xuquuqaha aadanaha, oo ay ka mid tahay xuquuqda ammaan ee shakhsiga. Soomaaliya oo ay dagaallo ka socdeen 22 sanadood waxaa ay weli la kacaa-kufeysaa rabshad ku dhisan jinsi oo ka dhacaysa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada (kufsi, gacan ka hadalka guriga ka dhaca, iwm.). Haweenka iyo gabdhaha ayaa gaar ahaan lagu bartilmaameesadaa kufsi iyo tahriibin.
15kii Juunyo, 2013, ayaa Soomaaliya ay diyaarisey Siyaasad Qaran ee Arrimaha Dheddigga iyo Labka (National Gender Policy) tii ugu horreysey ee abid ay diyaariso si ay ugu faahfaahiso istiraatiijado lagu awood-siinayo haweenka iyo tallaabooyin mudnaan la siiyo sida Waxbarashada, Caafimaadka, ka-qaybgalka Siyaasadeed iyo awoodsiin Dhaqaale. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay hadda gacanta ku haysaa hawl lagu dardargelinayo nidaamka garsoorka si uu wax uga qabto dhacdooyinka Rabshadda Ku-saleysan Jinsiga (GBV) iyo sidoo kale xoojinta habab sharciyeed oo ilaaliya haweenka oo meesha ka saarana in aan la isu raacan dembiyada laga galo haweenka.
Ka dib 22 sano oo colaadi ay jirtey, ayaa hay’adaha garsoorka aaney lahayn awood ay wax kaga qabtaan Rabshadda ku saleysan Jinsiga. Tababarkan waxaa uu xoojinayaa sidii garsoorayaasha iyo hawl-wadeennada garsoorka ay sharciga caalamiga ah ee xuquuqaha haweenku ugu adeegsan lahaayeen maxkamadaha degaanka, sidaa daraaddeedna ay u sii wanaajin lahaayeen awoodda ay wax kaga qabanayaan rabshadda ka dhanka ah haweenka ayna ku hubinayaan in si sida ay hadda xaaladdu tahay si ka wanaagsan xuquuqaha haweenka loogu dhowro Soomaaliya. Qabanqaabinta tababarka waxaa iska kaashadey Agaasinka Haweenka iyo Arrimaha Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Agaasinta Garsoorka iyaga oo gacan ka geysanaya dadaalka uu dalku ku doonayo in lagu joojiyo rabshadda jinsiga ku saleysan ee ka dhanka ah haweenka. Si waafaqsan hawsha AMISOM loo igmadey, ayaa Qaybta Arrimaha Dheddigga iyo Labka, oo taageero ka heleysa Waaxda Arrimaha Dheddigga iyo Labka iyo Arrimaha Rayidka (The Gender and Civil Affairs), Xafiiska Arrimaha Sharciga (Legal Office Unit), oo ayna si dhow ay u wada shaqeynayaan Wasaaradda Garsoorka iyo Arrimaha Diinta iyo sidoo kale Agaasinka Haweenka iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliya, waxaa ay qabanqaabiyeen Tababar afar (4) maalmood soconaya oo ku saabsan garsoor Sinnaan ku dhisan oo ay fuliyaan hay’adaha Garsoorka ee Soomaaliya, kaas oo lagu qaban doono magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Yoolalka iyo Ujeeddooyinka
Hadafka guud ee laga leeyahay aqoon-is-weydaarsigan waa in la bixiyo fursado lagu dhisayo kartida uu garsoorka Soomaaliya u leeyahay arrimaha la xiriira dheddigga iyo labka, halka ujeeddooyinka gaarka ah ee laga leeyahayna ay ka mid yihiin:
Fududeynta in si gundheer loo fahmo fikradaha kala duwan ee arrimaha dheddigga iyo labka iyo ereyada la xiriira;
In ka-qaybgalayaashu ay bartaan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa goboleed ee ilaaliya haweenka;
In la sii horumariyo xuquuqaha aadanaha iyada oo la bixinayo barnaamijyo waxbarashada garsoorka ah;
In xididdada loo saaro dhinac u xaqlinta nidaamyada garsoorka; iyo
In kor loo qaado in haweenku ay soo dhex galaan nidaamka garsoorka.
Natiijooyinka La Filayo
Natiijooyinka ugu waaweyn ee mashruucan la soo jeedinayo waxaa ka mid ahaan doona:
In ka-qaybgalayaashu ay si gundheer u fahmaan arrimaha dheddigga iyo labka iyo ereyada la xiriira;
Nidaamka garsoorka oo kor u qaada xuquuqaha aadanaha;
In xididdada loo saaro dhinac u xaqlinta la xiriirta dheddigga iyo labka ee ku jirta nidaamyada garsoorka; iyo
In kor loo qaado sida ay haweenku u dhex geli karaan nidaamka garsoorka.
HABKA FULINTA AQOON-IS-WEYDAARSIGA
Aqoon-is-weydaarsigu waxaa uu adeegsan doonaa habab ka-qaybgal ku dhisan oo hubinaya in ka-qaybgalayaashu ay si buuxda uga qaybgalaan baarista fikradaha iyo qeexidaha u habboon taas oo aasaas u ah fahamkooda ku aaddan arrimaha dheddigga iyo labka iyo xuquuqaha aadanaha.
Habka gudbinta aqoon-is-weydaarsiga waxaa uu aqoonsan doonaa waayo-aragnimada ay ka-qaybgalayaashu keenaan waxaana uu raadin doonaa siyaabo looga sii ambaqaadi karo fahamkaa aasaasiga ah, si ay u arki karaan kaalin ay ka qaadan karaan geeddi-socodka ayna u aamini karaan in waxa ka soo baxa aqoon-is-weydaarsigu ay iyagu leeyihin.
Habka fulintu waxaa uu isugu jiri doonaa layliyo la wada sameeyo oo dhiirrigeliyo in uu qofku fekero iyo in dib la isugu noqdo iyada oo la adeegsanayo hawl-kooxeed keeneysa in si isa sii tareysa kor loogu qaado wacyiga iyo fahamka arrimaha la xiriira rabshadda ku saleysan dheddigga iyo labka.
Kooxda ugu weyn ee lala beegsano aqoon-is-weydaarsigu waa soddonka (30) garsoore iyo hawl-wadeennada garsoorka ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqaha haweenka iyo NGO-yo.
Garsoorayaashu waxaa ay ka kala ahaan doonaan kuwa Xeer-dhaqameedka, Shareecada iyo Xeerka Madaniga ah.
Waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona nabad-ilaaliyeyaasha dheddigga ah iyo saraakiisha booliska ee dheddigga ah ee ka kala socda mileteriga iyo booliska AMISOM iyo sidoo kale Agaasinka Arrimaha Dheddigga iyo Labka ee Midowga Afrika.
Muddada iyo Madasha
Aqoon-is-weydaarsiga xoojinta kartida garsoorka Soomaaliya uu wax kaga qabanayo rabshadda ku dhisan Dheddigga iyo Labka ee Soomaaliya waxaa lagu qaban doonaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti 02da ilaa 05ta Disembar, 2013.